HERE na Loqate gbasaa mmekorita iji nyere ụlọ ọrụ aka ebuli nnyefe - Geofumadas
Julaị, 2020 Cartografia, Geospatial - GIS
EGO Teknụzụ, ebe data na teknụzụ teknụzụ dị, na Loqate, bụ onye na-eweta mmepe nke nkwenye adreesị zuru ụwa ọnụ na ngwọta geocoding, ekwupụtala njikọ aka agbasawanye iji nye ndị na-azụ ahịa kacha ọhụrụ na njide okwu, nkwado, na teknụzụ geocoding. Azụmaahịa na ụlọ ọrụ niile chọrọ data data kwenyesiri ike maka ọrụ ụbọchị kwa ụbọchị, ọkachasị ndị na-ere ahịa, ụgbọ njem na ngwa agha, ọrụ ego, yana ahụike.
Loqate na-agbakwụnye HERE data data, geocoder, na algorithms na-agagharị n'ime ngwanrọ adreesị njide ya na nkwenye. Mmekọrịta gbasaa gbasaa na-enyere ụlọ ọrụ aka ịwulite ihe ngwọta ha chọrọ iji bulite nnyefe nke ngwaahịa ha, ọrụ ha, yana mmekọrịta ndị ahịa niile.
Justin Duling, Onye isi oche ndị isi na Onye Ọkachamara cialzụmaahịa, Loqate kwuru, "Nnukwu mmekọrịta nke Loqate na HERE, ndị isi ndị ọkachamara na nkewa nke mba ụwa na data ọnọdụ, na-enyere anyị aka ịnye ndị na-eduzi ahịa ahịa. . "Anyị na-atụ anya ịgbasawanye mmekorita anyị na HERE iji zaa okwu ọnọdụ data n'ọdịnihu site n'aka ndị mmekọ na ndị ahịa anyị."
Ntughari dijitalụ nke adreesị nzipu ozi gaa kpọmkwem na ọnọdụ na latitude nke a kpara na map (geocoding) abụrụla ngwa ọrụ dị oke mkpa maka azụmahịa kwa ụbọchị. Ka njem ndị ahịa na-adịwanye digitized, data ọnọdụ ga-abụ njirimara dị oke egwu iji nyefee ahụmịhe ka elu.
"Kwa ụbọchị, ndị mmadụ na kọmputa gburugburu ụwa na-edekọ ma ọ bụ na-agụ ọtụtụ nde adreesị, ha niile chọrọ nkwado maka izu ezu na izi ezi," ka Jason Bettinger, Onye isi Retail na Ọrụ Ọrụ Ego. "Obi dị anyị ụtọ ịgbasa mmekọrịta anyị na Loqate ka anyị na-ejikọ teknụzụ kachasị mma iji hụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ naanị na ezigbo data ọnọdụ bara ụba maka mkpa ha na nke ndị ahịa."
Ebe a na-egosi map nwere ọtụtụ data, dị ka nzi ozi na nchịkwa nchịkwa, adreesị, netwọk okporo ụzọ na usoro njem, isi ihe ndị nwere mmasị, na ndị ọzọ. The data ga-eme ka ihe proprietary data curation ike nke Loqate nke mepụtara data ngosipụta nke adịchaghị eji njikwa adreesị ụwa na njikwa nkwenye ya.
Taa, Loqate na-enye usoro nnwale zuru ụwa ọnụ zuru ezu, nke mepụtara na ngwaahịa abụọ, nke ndị isi ụwa na-eweta data kwadoro.
1) Jidere, ngwaahịa na-ebu amụma ihe ga - enyere aka weghara adreesị mmekọrịta zuru ụwa ọnụ ozugbo na oge nke okike data ọhụrụ, yana
2) Nyochaa, ngwaahịa nwere ike imelite, nyochaa ma melite ọdụ data, tinye geocoding, ma weghachite geocoding na ndekọ ndị ahụ edepụtara.
Previous Post«Previous GRAPHISOFT na-agbasa BIMcloud dị ka ọrụ maka nnweta ụwa
Next Post Esri na-ebi akwụkwọ Smarter Government Workbook nke Martin O'Malley dereNext »